भूलेर पनि यसरी छालामा नलगाउनुहोस् कागती, नत्र देखिनसक्छ यस्तो समस्याहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
भूलेर पनि यसरी छालामा नलगाउनुहोस् कागती, नत्र देखिनसक्छ यस्तो समस्याहरु !!
कागतीको प्रयोग अनुहारको तत्वचाको लागी बहुतै लाभदायक हुने गर्दछ। भनिन्छ कि कागतीको प्रयोगले तत्वचाको रंग सफा हुने गर्दछ।
दाग धब्बा जस्ता समस्याहरुबााट पनि राहत मिल्ने गर्दछ। हरेक सिक्काको दुई पाटा हुने गर्दछन्। यदि कागतीको फाइदा हुन्छ भने यसको बेफाइदा पनि हुने गर्दछ। जसको कारणले तपाईले कागतीको प्रयोग गर्नु जोखीमपूर्ण पनि बन्नसक्छ।
तपाईंले केही व्यक्तिहरूको छालामा सेतो र ठूला दागहरू देख्नु भएको छ होला । यस छालाको अवस्थालाई ल्युकोडर्मा वा भटिलिगो भनिन्छ।
छालामा मेलानिनको कम स्तरको कारण, छाला सेतो हुन थाल्छ। जब मानिसहरूले छालामा दागहरू हटाउन निम्बू प्रयोग गर्छन्, यसले मेलानिनको स्तर कम गर्न सक्छ।
जब हामी छालामा कागती प्रयोग गर्दछौं, यसले तपाईको छालामा सनबर्नको जोखिमलाई बढाउँछ। यदि तपाईं कतै बाहिर जानको लागि योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि केहि दिन अघि वा लगातारको लागि कागती प्रयोग नगर्नुहोस्। यो तपाइँको छाला को लागी हानिकारक हुन सक्छ। (नयाँ पुस्ता बाट सभार)
यी १० बानीहरु आजै त्याग्नुस्, नत्र हुन्छ मृगौला ड्यामेज !!